Ties eziphezulu Abakhiqizi futhi Suppliers | China eziphezulu Ties Factory
Izibopho eziphezulu zenzelwe ukufanisa ikhanda, entanyeni polymer insulators, zobumba yisivikelo, post-uhlobo insulators ukuba umqhubi isicelo, kuthabathela ecaleni phezulu yisivikelo. Yisivikelo uthayi phezulu isetshenziselwa angenalutho zasemoyeni babashayeli inqwaba ku MV futhi HV amandla ukudluliswa amanethiwekhi. Tie ophezulu we-yisivikelo polymer zenziwa aluminium ehlanganiswa steel, i-aluminiyamu izinto. Material kwezibopho heliformed phezulu incike uhlobo lwento of umqhubi ukuba usetshenziswe, ACCC noma ACSR. Uthayi preformed yisivikelo phezulu ngaphezu kwalokho ifakwe iribhoni Rube ukuze wehlise nemihuzuko ka umqhubi kanye yisivikelo.